अस्पतालपिच्छे डेङ्गु परीक्षण शुल्क : तीन सयको कीट, परीक्षण साढे दुई हजार ! – Chitwan Post
अस्पतालपिच्छे डेङ्गु परीक्षण शुल्क : तीन सयको कीट, परीक्षण साढे दुई हजार !
भरतपुर । डेङ्गु संक्रमण र भाइरलले सताइरहेको बेलामा यहाँका निजी अस्पतालहरुले भने आफूखुसी डेङ्गु परीक्षण शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । ज्वरोका बिरामी प्रायःको अनिवार्य डेङ्गु परीक्षण हुने गरेको छ । निजी अस्पताल र भरतपुरमा रहेका केही प्रयोगशालाहरुले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् ।
डेङ्गुको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा भरतपुर चौबीसकोठीआसपास रहेका केही निजी अस्पताल र प्रयोगशालामा गई बुझ्दा डेङ्गु परीक्षण शुल्क फरक–फरक रहेको पाइएको छ । जाँचको प्रकार र विधि एउटै तर शुल्क भने घटबढ भएको पाइएको हो । ज्वरो आएको दिन वा समयको आधारमा विभिन्न परीक्षण गरी डेङ्गु भए/नभएको पुष्टि गरिन्छ ।
एनएस, एन्टिबडी र एन्जिजिन भनी गरिएका परीक्षणहरु एकनासको भए पनि शुल्क भने घटबढ भएको पाइएको हो । अस्पतालहरुले लिइरहेको परीक्षण शुल्कबारे गुनासो आएकाले आफूहरु पनि छलफलका लागि तयार रहेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले भने, ‘निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई बोलाएर छलफल गरी परीक्षण शुल्कमा एकरुपता ल्याउन कोसिस गर्नेछौँ ।’
डेङ्गु परीक्षण गर्ने एउटा गुणस्तरीय कीटलाई बढीमा ३ सय रूपैयाँमा अस्पतालहरुले किन्छन्, तर न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम २ हजार ६ सयसम्म परीक्षण शुल्क लिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा कीटको अभाव छ । सरकारी अस्पतालले यसमा निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ ।
अस्पतालहरुले डेङ्गु परीक्षणको नाममा चर्को शुल्क लिएको भरतपुर १० का दिलीप केसीले बताए । डेङ्गु परीक्षणसँगै अन्य थुप्रै प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा अस्पताल बसेको दुई–तीन दिनमै हजारौँको बिल तिर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
चितवनमा पछिल्लो समय डेङ्गुको संक्रमण बढ्दो छ । भदौ १८ गतेसम्ममा कुल २ हजार १ सय ६८ परीक्षण भएकोमा ६ सय ८० जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी राम केसीले जानकारी दिए ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले सामान्य अवस्थामा पनि डेङ्गु परीक्षण गर्ने÷गराउने गरेको बताए । डेङ्गुको उच्च सम्भावना रहेमा सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण सेवा लिन सकिने र त्यसका लागि कीटको व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए ।
निजी अस्पतालले डेङ्गु संक्रमणको यस अवस्थालाई कमाउ धन्दाको अवसरका रुपमा लिन नहुने प्रजिअ बस्नेतको भनाइ छ ।
अस्पतालको नाम / परीक्षण शुल्क
एडभान्स अस्पताल : २ हजार
जयबुद्ध अस्पताल : १५ सय
चितवन अस्पताल : १ हजार
नेसनल सिटी : २ हजार
नारायणी सामुदायिक : २ हजार
भरतपुर सामुदायिक १५ सय ३०
चितवन मोडल हस्पिटल : २ हजार ६ सय
नयाँ मेडिकल कलेज : १८ सय
पुरानो मेडिकल कलेज : १५ सय
श्री पुष्पाञ्जली अस्पताल : १६ सय
एनआरएल ल्याब : ११ सय
आरडीएल : १५ सय
आइआरएल : १२ सय